Ministry of Health and Sports - Myanmar
Two Objectives of the Ministry of Health and Sports - 1. To enable every citizen to attain full life expectancy and enjoy longevity of life. 2. To ensure that every citizen is free from diseases. Three Strategies to Implement the Objectives of the Ministry of Health - 1. Widespread dissemination of health information and education to reach the rural areas. 2. Enhancing disease prevention activities. 3. Providing effective treatment for prevailing diseases. Health in Myanmar
MYANMAR HEALTH CARE SYSTEM HEALTH POLICY, LEGISLATION AND PLANS
Monitoring of Pharmaceutical Sector
Strengthening Capacity of Training Team
Services for the Target Population Group Maternal and Child Health
Women and Child Health Development
Elderly Care Promoting and Protecting Healthy Communities
Tobacco Control Measure
Ensuring Safer Food and Drug Controlling Communicable Diseases
Controlling Communicable Diseases Diseases of National Concern
Communicable Disease Prevention, Surveillance and Response
MANAGING HEALTH WORK FORCE
ASEAN+3 Ministry of Health Websites
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ကျင်းပသော Seminar on the significance of health for development in Myanmar ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း(၇၇)ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကောင်စီအစည်းအဝေးနှင့် ဒွါဒဿမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ ညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Opening speech by Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, at the opening ceremony of the "2016 Asian Men's Club Volleyball Championship", Wunna Theikdi Indoor Stadium Nay Pyi Taw, Myanmar (23rd August 2016)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မိတ္ထီလာမြို့နယ် အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံနှင့် သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းတို့အား စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအထူးကုဆေးရုံ ဝေဘာဂီ၊ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးနှင့် အထူးကုဆေးရုံ၊ မင်္ဂလာဒုံတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ တည်းခိုနေထိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားမှုကြည့်ရှုစစ်ဆေး
မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်းမှ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရေဘေးသင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် အလှူငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား
ကမ္ဘာ့မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေး ရက်သတ္တပတ်နှင့် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရက်သတ္တပတ်များ ဗဟိုအဆင့်ဖွင်ပွဲအခမ်းအနား (၂၀၁၆) တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြားသည့်အဖွင့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၌ (၃-၈-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၅-၈-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွက်ကြားသည့် အပိတ်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၌ (၃-၈-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၅-၈-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွက်ကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Round Table Forum on the ASEAN Experience of Cities/Areas Getting to Zeros: Side meeting during the United Nation High Level meeting on Ending AIDS
Department of Health Professional Resource
Department of Sports and Physical Education	Health and Health Related Laws
Order of Marketing of Formulated Food for Infant and Young Child Publications Public Health Statistics Report 2013
Hospital Statistics Report 2013	Public Health Statistics Report 2012
Hospital Statistics Report 2012
Public Health Statistics Report 2010-2011
Hospital Statistics Report 2010-2011
HIS Strategic plan (2011-2015)
National List of Essential and Complementary Medicines
Utilization of Seasonal Flowers in Common Health Problems
Myanmar Towards Universal Health
Technical Consultation Meeting on UHC in Myanmar
Consultation Meeting on Formulation of Roadmap and Implementation
Ministry of Health - World Bank (Health Project Safeguard Documents)
Related UN Organizations
Choose City Name
This is the official website of Ministry of Health and Sports.